Apple patent yekhibhodi isina epanyama makiyi ane haptic mhinduro | Ndinobva mac
Apple patent yekhibhodi isina epanyama makiyi ane haptic mhinduro
Mvumo yeApple hapana mubvunzo kuti inyaya yakaoma, asi zviri pachena kuti havasi kuzoramba vakamira mune izvi uye vari kuzoisa patent zvese zvavanogona kuti vabatsirwe. Apple keyboard isina makiyi izvozvi, asi zvinokwanisika kuti mune ramangwana rinouya, izvi ndizvo chaizvo izvo iyi patent nyowani yakanyoreswa neApple inoratidza.
Unogona kuona kuti iyo chaiyo khibhodi inogona kubatanidzwa zvizere muMacBook uye mhinduro yaizopa kana yabatwa yaizofanana neiyo yeSimba Kubata. Chero zvazvingaitika, iyo keyboard isina kiyi chimwe chinhu chakambovapo kwenguva yakareba, asi kwete kuApple uye patent yakamisikidzwa kuUS Patent uye Trademark Hofisi muna Nyamavhuvhu 31, 2017, yava kubuda sekubvumidzwa.
Makirabhu asina makiyi epanyama
Pfungwa iyi yatovepo uye chokwadika tinayo iri padhuze neiyo iPad kana iyo iPhone, asi paMac isina makiyi epanyama inogona kuva dambudziko kune vazhinji vashandisi (kusanganisira ini) nekuti kusava nazvo zvaunofunga iine kiyi iyo "inonyura" pasi pekumanikidzwa. Asi Apple inoita kunge ine mhinduro kune izvo uye iyo pani yaizopa pulsation-senge kunzwa nekuda kwehaptic mhinduro.
Ini handisi kunyatso kujekesa kuti Apple inogona kushandisa iyi patent paMacBook, zvirinani munguva pfupi, asi zviri pachena kuti patent iripo uye izvi zvinovhura mukana. Sezvandinotaura pane dzakawanda nguva, sarudzo dzekuve neicho kiibhodhi yakawanda uye inopa zvirinani kuenderana nemaapplication uye kuchinjika kune kushandiswa kwemuridzi, asi kana zvasvika kune chaiko nyaya yekunyora, kwandiri zviri nani kuve keyboard zvakajairika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Apple patent yekhibhodi isina epanyama makiyi ane haptic mhinduro
Maitiro ekuisa Kodi pane Mac
Ivo vanowana kushomeka muSafari mukati meiyo hacker chiitiko Pwn2Own